Nicbọchị ndị a Nicaragua na-arụ ọrụ na 80% naanị na mmeghari ohuru | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ihe mmeghari ohuru na-enye ihe kariri 80% nke ume na Nicaragua
Tomas Bigordà | | Bayam, Ike ikuku, Ike ikuku, ike hydraulic, Ike Igwe fotovoltaic, Ike imeghari ohuru
Ọgbọ eletrik nke nwere isi mmalite na Nicaragua dị gburugburu 53% nke ngụkọta, mana afọ a, dị ka Minista Energy na Mines (MEN) Salvador Mansell si kwuo, enwere ụbọchị ole na ole ebe isi mmalite ndị a nyere netwọkụ ahụ. gbakwunye 84% nke ume eji na mba.
Nke a pụtara, dịka gọọmentị si kwuo, nnukwu ikike nke obodo ahụ nwere dị ọcha ume. Onye ozi nke MEN kwuru na n'ọnwa ndị dị ka Nọvemba, Eprel ma ọ bụ Machị, mgbe mba ahụ nwere ifufe siri ike, ala ikuku niile na-arụ ọrụ na 100%, na mgbakwunye na onyinye nke osisi hydroelectric, ọgbọ ruru ihe dịka 84% na isi mmalite.
Mansell kwukwara na “Mgbe ọnọdụ dị ezigbo mma maka isi mmalite maka mmegharị nwere ike iwepụta, a na-ebute ha ụzọ na ọrụ nke usoro a kwa ụbọchị. dị mkpa na njikwa ahịa. Na mba anyị na-eji akụnụba ndị ọzọ eme ihe ”.
N'ezie, Mansell ewepụghị na afọ a enwere ụbọchị nke ọ ga-ekwe omume iru ịrị elu karịa 85% nke ọgbọ nwere isi mmalite dị ọcha, n'agbanyeghị na ọ siri ọnwụ na a ga-ezute ọtụtụ. Ọnọdụ ihu igwe iji ruo ndekọ ọhụrụ ahụ. Na mgbakwunye, na 2017 ka etinyere igwe ọhụụ ọhụrụ 12 megawatt na mpaghara Puerto Sandino.
Dị ka gọọmentị si kwuo: “Anyị nwere ọgbọ na-ekpo ọkụ, mana ọ bụ ịkwado, mgbe nsogbu dị, mgbe ikuku na-adịghị, mmiri adịghị, enwere nsogbu n'akụkụ anyanwụ, mgbe ahụ anyị nwere ndabere thermal iji gaa n'ihu na ike ọrụ nye ndị mmadụ ”.
2016 mechiri na 53% ọgbọ kwụsiri ike site na iji nweta mmeghari ohuru na ebumnuche nke ulo oru a bu ime ka onu ogugu a.
1 Nkọwa Worldwa
2 Ike ikuku na Nicaragua
3 Di iche iche nke isi mmalite
4 Etinyela ego na mba ofesi
N'ezie, Nicaragua nọgidere bụrụ ihe atụ nke mmepụta ọkụ eletrik na isi mmalite. Na nso nso a, ntọala The Project Climate Reality Project - nke e guzobere na 2006 site n’aka onye bụbu onye isi oche nke United States, Al Gore - ghọtara obodo ahụ dịka nke mba atọ ahụ, ya na Sweden na Costa Rica, nke na-edozi ụzọ a ga - agbaso na mpaghara a n’ụwa niile, nke bụ ụzọ bụ isi iji belata ikuku gas.
Ma ọ bụghị maka obere. 27.5% nke na-anọchite anya ọgbọ nke ume ọhụrụ na 2007, gara 52% na 2014, na 53% na 2016. Ihe mgbaru ọsọ dị ukwuu nke Gọọmentị bụ iji nweta 90% na 2020, na oru ndi mmadu na nke ndi mmadu. N’agbata afọ 2007 na 2013 naanị, ikuku, biomass, hydroelectric na solar rụpụtara ihe ọzọ ruru megawatt 180 na netwọk nkesa ọkụ eletrik nke mba, nke na-achọ kwa ụbọchị 550 megawatt.
Ike ikuku na Nicaragua
Dịka e kwuru n'elu, National Interconnected System (SIN) dere na na 2016, ọnụọgụ ọkụ eletrik nwere isi mmalite ruru 53%. Na ifufe ike osisi ha nọchitere anya 31%, osisi geothermal 28.6%, osisi hydroelectric 26.8% na igwe shuga 13.6%.
N'ihe banyere ike ikuku, ọrụ ndị kacha anọchite anya mba ahụ bụ Amayo I na II dị na ngalaba nke Rivas ma na-eduzi ndị ọrụ Canada Amayo SA, nke na-ewepụta ihe dị ka megawatts 63
Afọ a, onyinye nke photovoltaic osisi nke dị na Puerto Sandino, n'oge ahụ ọ bụ naanị ya na-ewepụta ike anyanwụ maka netwọk nkesa nke mba ahụ.
N'ezie, ike anyanwụ dị ugbu a na mba ahụ, mana maka otu ọgbọ.
Na njedebe nke afọ a, gọọmentị na-ezube iji nweta 94% ọkụ eletrik na mpaghara mba. "Dabere na atụmatụ na usoro mepụtara, ebumnuche anyị bụ iru 2021% ọkụ eletrik na 99," ka Mansell kwuru.
Di iche iche nke isi mmalite
Obodo a nwere Tumarín hydroelectric macroproject, nke na-enwe mmepe na mpaghara ndịda Caribbean nke Nicaragua, dị ka atụmanya. ga-enye 253 megawat, ozugbo ọ malitere ọrụ ya na njedebe nke 2019.
César Zamora, onye njikwa mba nke ụlọ ọrụ ume IC Power, kwuru na ntinye Nicaragua ọcha ume pụta dị ka ihe ngwọta nke nsogbu nke ọkụ eletrik nke mba ahụ nwere tupu 2007.
“Iwu maka Nkwalite Ọgbọ Eletrik na isi mmalite ndị nwere ike ịgbanwe ya yana gọọmentị ọhụrụ (2007, Daniel Ortega) bidoro mkparịta ụka na ndị nnọchi anya mpaghara ike na Cosep (Superior Council of Private Enterprise) iji hazie etu esi apụ. Ọ bụ nsogbu ahụ.
Zamora kwuru na ọ ga-ekwe omume ịgbanye megawatts 180 nke ikuku ikuku na ntanetị nkesa, megawatts 70 nke ike ikuku site na San Jacinto-Tizate mgbagwoju, 50 megawatts nke ike hydroelectric site na ọrụ ndị ahụ Larreynaga (steeti), Hidropantasma na El Diamante, nke malitere ịrụ ọrụ na Disemba gara aga, ebe ọ bụ na bayam Otu osisi nwere megawat 30 na Santa Rosa na San Antonio, na-enwe 80 megawatt n'etiti ha abụọ.
Etinyela ego na mba ofesi
Maka Jahosca López, onye nhazi nke ụlọ ọrụ Nicaraguan Renewable Association, nnukwu ọganihu nke mba a na mpaghara a bụ n'ihi amụma ndị gọọmentị kwalitere iji gbaa ume ego mba na mba ofesi, kpọmkwem Iwu maka Nkwalite Ọgbọ Eletrik na isi mmalite.
Na June 2015, kwuru na National Assembly megharịrị iwu iji gbakwunye ihe mgbakwunye maka ọrụ ume ọhụrụ maka afọ atọ ọzọ.
Otu n'ime arụmụka nke ndị omeiwu nyere n'oge ahụ bụ na ka mba ahụ na-agbanwe matrik ike ya a na-ebelata tarifu eletrik.
Onye nhazi ahụ gosikwara na mmepe teknụzụ emetụtala, nke mere ka nhazi na mmebe nke ọrụ na a ịrụ ọrụ nke ọma, na mgbakwunye na ịkwalite mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ụfọdụ obodo nwere mgbatị gburugburu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ihe mmeghari ohuru na-enye ihe kariri 80% nke ume na Nicaragua
Ihe na-ebute na nsonaazụ nke mmetọ ala
Ike ndị nwere ume iru ụgbọ njem ọha na eze